5 Fonteedyo Bilaash ah oo Download ah Shaqadaada ugu Fiican | Abuurista khadka tooska ah
5 nooc oo bilaash ah oo loogu talagalay soo dejinta shaqadaada
Sii xoogga lagama maarmaanka ah boodhadhku maahan oo keliya arrin ku saabsan sawirro, ama midabbo. Sawir aad u cabsi badan ayaa qiimo yar haddii aan ku raacno qoraal ku qoran Comic Sans, iyadoo aan loo eegin inta aan ku horumarinay Photoshop.
El adduunka qoraal ahaan Waa mid aad u ballaadhan, waana sababtaas darteed inay jiraan buugaag badan oo u heellan ka hadalka arrintaas. Mawduuca ugu xiisaha badan, haddii aan rabno inaan kor u qaadno tayada mashaariicdeenna. Waxaa muhiim ah in la ogaado nooca farta loo adeegsado in lagu gudbiyo iyadoo loo eegayo dareenka, maxaa yeelay dhammaantood isku wax ma wada aha. Waana mid ka mid ah sababaha maanta aan kuu keenayno 5 noocyada soo degsashada oo bilaash ah. Hadaad jeceshahay iyaga la wadaag.
Noocyada soo dejinta ee bilaashka ah
Tani ma aha qoraalkii ugu horreeyay ee aan kula wadaagno farriimaha bilaashka ah. Waxaan horeyba ugu qabannay boostada aan caadiga ahayn: illaa iyo hadda waan kahadalnay noocyada loogu talagalay naqshadeynta websaydhka Xitaa waxaan qornay maqaal taxane ah oo aan kugu soo qaadanay 5 nooc oo bilaash ah. Haddii aad ka hesho kuwa aan maanta kuu keenayno, ha ka waaban inaad wadaagto.
Qoraalka Blenda: Nooc tijaabo ah oo tijaabo ah oo lagu dhiirrigeliyay font "Lobster". Waxaa loo isticmaali karaa boorarka, astaamaha, iwm. Waxaan leenahay hal miisaan oo bilaash ah: geesinimada. Shati: bilaash u ah adeegsiga ganacsi iyo shaqsiyeed.
Adam. Bilaash ganacsi ahaan iyo adeegsi shaqsiyeed.
Cab Neue- Sans serif teeb ku saleysan nooca Ryoichi Tsunekawa asalkiisii ​​hore Bebas Neue, oo loo yaqaan Helvetica ee noocyada bilaashka ah. Xiriirkan waxaan ku soo dejisan karnaa 5 kala duwanaansho nooca qoyska.
Margot: Waxaa abuuray hal abuure ku xeel dheer Barcelona Adrià Gómez, font-kan waxaa loo qaabeeyay loona habeeyay in lagu isticmaalo cabbirro aad u tiro badan.
Fatface Abriil- Waxaa dhiirrigeliyay cinwaannadii waaweynaa ee qarnigii XNUMX-aad boorarka Ingiriiska iyo Faransiiska.
Macluumaad dheeraad ah - 8 Fonts Design Web Free, 5 Fonts Bilaash ah (VI)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » 5 nooc oo bilaash ah oo loogu talagalay soo dejinta shaqadaada